Location: musha » Kutumira » Nyika | Dunhu » Itari » Rome's iconic Casino dell'Aurora inoenda pane auction block
Kasino dell'Aurora - kumusha kune yega sirin'i mural yepasi rose yakapendwa neCaravaggio, ine mutengo unofungidzirwa we471 miriyoni ($540 miriyoni), ndeimwe yedzimba dzinodhura kwazvo dzakamboiswa pamusika.
Iyo 2,800-square-mita (30,000 square tsoka) Kasino di Villa Boncompagni Ludovisi, inozivikanwawo seVilla Aurora, iri padyo Roma's Via Veneto, inoenda pasi pechivharo nhasi mu "auction yezana ramakore."
Kasino dell'Aurora - musha wepasi rose wedenga mural wakapendwa neCaravaggio, ine mutengo unofungidzirwa we471 miriyoni ($540 miriyoni), ndiyo imwe yedzimba dzinodhura kwazvo dzakamboiswa pamusika..
Yakawanda yekukosha kwayo inonzi yakaverengerwa murals neItalian Baroque paints Caravaggio naGuercino, pamwe chete nezvimwe zviwanikwa zvetsika.
Makamuri akati wandei akafemerwa naGuercino, kusanganisira imwe ine Aurora, mwarikadzi weRoma wemambakwedza. Zita rechivako ichi rinobva pairi basa, sezvo richishongedza imba huru yokugamuchira vanhu.
Iyo villa inonyanya kukosha midziyo ndeyeCaravaggio mural inoratidza Jupiter, Neptune, uye Pluto. Kufambidzana kumashure muna 1597 uye kuwanikwazve muna 1968, ndiyo chete inozivikanwa sirin'i mural yakapendwa nemutambi ane mukurumbira. Izvi chete zvinokosheswa pamamiriyoni mazana matatu nemakumi matatu emadhora.
Kunze kwemafresco anokosha, Kasino dell'Aurora ine nhoroondo yevashanyi vakakurumbira kwemazana emakore, vakadai semunyori weAmerica-British Henry James uye munyori wekuRussia Pyotr Tchaikovsky.
Iyo Casino dell'Aurora yakavakwa muna 1570 uye yanga iri yemhuri yeLudovisi kubvira kutanga kwema1600s. Mushure mekufa kwemuridzi wayo wekupedzisira, Muchinda Nicolo Boncompagni Ludovisi, muna 2018, yakava nyaya yekunetsana kwenguva refu yenhaka pakati pevanakomana vatatu kubva kumuchato wake wekutanga nemukadzi wake wechitatu, Princess wekuAmerica akaberekerwa Rita Jenrette Boncompagni Ludovisi. Iwo ekupedzisira apedza mazhinji emakore ekupedzisira e20 achigadzirisa chivakwa.
Matare akazopa mutongo wekuti midziyo iyi ikwidzwe. Ani nani anotenga villa, iyo inodzivirirwa na Italian Mitemo yenhaka yetsika, ichave inosungirwa kushandisa imwezve € 11 miriyoni mukudzoreredza.
Iyo yekutanga bhidhi yenzvimbo yakaiswa pa €353 miriyoni (inenge $401 miriyoni).